Falanqeyn: Shantii Dhuusamareeb, shanbaa iiga soo baxday – Kalfadhi
1- Shirka wadatashiga Dhuusamareeb uga socday madaxda-maamul gobolleedyada dalka wajigiisii koowaad.
Qodobada ugu muhiimsan ee lagu go’aamiyay waa in waqtigan dalka doorasho qof iyo cod ah ka dhici karin, taa oo u muuqata in lagu qiyaasey waqti dheer iyo diyaargarow ay u baahantahay doorasho qof iyo cod. Go’aan ka gaarista qodobkan wuxuu meesha ka saarayaa diyaargarowga Gudoomiyaha Gudiga Doorashada Xaliima Yareey.
2- Qodobka labaad ayaa ah mid muhiimad weyn dhalinkara kaa oo ah in ay Dhuusamareeb ku baaqdey markale in shir 2-aad Dhuusamareeb la isugu yimaado oo ay ka soo qeyb galidoonaan dhamaan madaxda maamul-gobolleedyada iyo madaxda Qaranka.
Taana waa guul kale oo dhalinkarta itijaah siyaasadeed oo mideysan.
3- Qodobada saadaalinta wajiga labaad ee Dhuusamareeb laba ayaa ah in la Isku afgarandoono, in dalka doorashadiisu ay noqoto, doorasho dadban iyo in wax laga bedelo qaabkii hore doorashooyinka dalku ay ku dhaceen.
Taa haday suura gasho, waa guul kale u soo hoyatay madaxda maamul-gobolleedyada oo doorashooyinka inta badan dalka ka dhicidoona in iyaga ay awood maamul ku lahaan-doonaan .
4- War-murtiyeedka shirka Shuusamareeb(1) ka soo baxay oo adduunka oo dhan uu ku hayo isha waxuu noqdey qodobo si degan loo diyaariyay laguna jaangooyay marxalada siyaasadeed ee dalka uu ku jiro waxaa laga ilaaliyay hadalo xanaf ku jira iyo awood sheegasho.
Taana waa guul siyaasadeed reer Galmudug Hogaamiyahooda gogoshan fidiyay Siyaasiyiintooda iyo shacabkooda u soo Hoyatay oo mudan in lagu amaano siday isaga Ilaaliyeen wax ceeb Iyo dib u dhac Qaranka u Keenikara
5- Saadaalintu marka si hoos loo eego waxay Noqoneysaa in shirkan uu noqondoono shir Midnimo qaran horseedikara in dalku ay ka Dhacdo Doorasho lagu mideysanyahay taa oo Meesha ka saareysa madmadowgii u Dhaxeeyey Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada fadaraalka Iyo Madaxda dowlada.
W/Q/ Mucaawiye Muudey
Akhriso: War-murtiyeedka laga soo saaray shirka wadatashiga dowlad-gobolleedyada